अब के हुन्छ ? | eAdarsha.com
तपाईं हामीलार्ई फेरि लाग्न थालेको छ, अब के हुन्छ ? भोलि के होला ? कलाकार मनोज गजुरेलकै शब्दमा भनौं ‘ढुक्क हुनुहोस् केही नहुन्जेलसम्म केही हुँदैन ।’ आज या भोलि केही हुनलाई हिजो केही नयाँ भएको हुुनपर्छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटन गरेपछि देश अस्थिरतातर्फ धकेलिन लाग्यो भन्दै धेरैले रोइलो गरेको छन् । हाम्रोमा यसअघि कहिले स्थिरताको अभ्यास भएको थियो र ? अनि ओली, प्रचण्ड, माधव नेपालसँग बढी अपेक्षा गरेका हौं भने त्यो उनीहरुको गल्ती होइन । हाम्रो भ्रम हो । कोदो पेलेर तेल आउने सपना देखेका थियौं भने त्यो कमजोरी थियो । उनीहरुबाट हुने नै यहि हो भने अब के होला भनेर समय बर्बाद नगरौं ।
अब विगत तर्फ जाऔं । विसं २००७ मा प्रजातन्त्र आयो । १५ मा विपी प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री भए । १७ मा राजा महेन्द्रले दलहरुलार्ई प्रतिबन्ध लगाए । ती घटनाक्रमपछि देशमा केही भयो । अहँ केही भएन । विसं २०४६ मा देशमा पुन प्रजातन्त्र आयो । २०५२ मा माओवादीले सशस्त्र युद्ध थाल्यो । १७ हजार निर्दोष नेपालीले ज्यान गुमाए । ६२/६३ मा जनआन्दोलन भयो, लोकतन्त्र आयो भनियो । विसं २०६४ देखि ७४ सम्म मा ३ पटक चुनाव भयो । नयाँ संविधान बन्यो । देशले एकदशकमा वर्षै पिच्छे प्रधानमन्त्री फेर्ने अवसर पाइराख्यो । मन्त्री र सांसदको संख्याको त कुरै छोडौं । सिंहदरबार र बालुवाटारका भित्ता भरिइसके होलान । नेमप्लेट बनाउने पेन्टर थाकिसके होलान । आखिर देशमा यतिका धेरै परिवर्तन त भइसकेको रहेछ । तर पनि केही भएको छ त ? त्यसैले फेरि पनि ढुक्क हुनुस् केही हुँदैन । धर्ती फाट्नेवाला छैन, आकाश चोइटिने पनि छैन । सगरमाथा समुद्र बन्ने पनि छैन । अनि समुद्र नै नभएको हाम्रो देशमा छाल पनि आउने छैन । त्यसैले आत्तिएकाहरु नआत्तिनुस, फुर्किएकाहरु नमात्तिनुस केही हुनेवाला नै छैन । यस्ता काण्ड र फण्डा त कति भए कति खै त के भयो ? अहिले फेरि भएको यत्ति हो, सांसदहरुको जागिर खुस्कियो । नचाहंँदा नचाहँदै २/४ थान मन्त्री राजीनामा धस्काउन बाध्य भए । बेमौसमको चुनाव घोषणा गरेर राज्यको ढुकुटी सिध्याउन लागे भन्ने कतिलार्ई चिन्ता होला । अब भन्नुस् त त्यो ढुकुटी जोगिँदा पनि त जनतालार्ई के भएको थियो र खै ? तसर्थ तपाईं हामी भुइँमान्छेलार्ई केही भए पनि केही हुनेवाला छैन । यसको मतलब हामी जनता न उत्तेजित भई हाल्नुपर्छ न हतोत्साही नै । घाटा या नाफाको हिसाब त टाउकेहरुकै लागि हो ।
फेरि चुनाव होला कांग्रेस, कम्युनिस्ट, राजावादी अनेकथरिले जित्लान् । तर हाम्रो भोटमा चोट पुरयाउनेले जबसम्म जित्नेछन तबसम्म केही हुँदैन
ए साँच्चै केही चाही फेरि अवश्य हुन्छ है । ढुक्क हुनुस । उसो भए के हुन्छ त ? ‘प्वाक्क आफैले आफैंलार्ई प्रश्न सोधें ।’ उत्तर पनि आइहाल्यो । हिजो जे भएको थियो त्यही नै हुन्छ । संसद विघटनको पक्ष र विपक्षमा गरमागरम बहस हुन्छन् । अब केही दिन या महिनासम्म स्वघोषित विश्लेषकहरुको चर्का चर्का अन्तरवार्ता टेलिभिजनका पर्दा र युट्युब च्यानलहरुमा हेर्न पाइन्छ । पत्रपत्रिका र न्युजपोर्टलहरुमा क्षण क्षणमै न्युज ब्रेकिड हुन थाल्छन् । गाउँका चिया पसलहरुमा झिसमिसेदेखि भट्टीहरुमा मध्यरातसम्म समस्याको चुरो खोज्न वादविवाद चल्नेछ । कतिले टाउको फोराफोर गर्लान् । हामीकहाँ ठाउँ र स्तर अनुसार एक से एक विश्लेषक छँदैछन् । कुनै एउटा दलको ट्याग नभिरी कोही बस्नै सक्दैन । विद्यार्थीदेखि शिक्षकसम्म डाक्टरदेखि इन्जिनियरसम्म सबैको आआफ्नै दलीय सँगठन छँदैछ । कामविहीन बेरोजगारहरु गाउँदेखि सहरसम्म हिमालदेखि तराईसम्म यत्रतत्र सर्बत्र छँदैछन् । तिनीहरुले फेरि काम पाउने नै भए । काम भएका रोजगारकर्मीलार्ई पनि राजनीतिक बहस गरेर समय काट्ने अवसर जुरिहाल्यो । हो यो सब हिजो भएकै थिए त्यसैले आज या भोलि पनि हुने यत्ति नै हो ।
फेरि पनि भन्छु केही चाहिँ अवश्य हुन्छ है । कोरोनाकालमा बढ्दो पक्ष विपक्षको जुलुसले कि कोरोना ह्वात्तै बढाउनेछ । कि कोरोना यतिमै सिमित रह्यो भने कोरोनाको डर भ्रम हो भन्ने पुष्टि गर्नेछ । किनकि हाम्रोमा जस्तो परिस्थिति होस् सभा, जुलुस, चक्काजाम, नेपाल बन्द, तोडफोड नगरी राजनीतिक गतिविधि हुने त कुरै भएन । हिजो सिकाउनेले पनि त्यही सिकाए । आज सिक्नेले पनि त्योभन्दा बढी केही सिकेन । त्यसैले त हामी हिजो जहाँ थियौं त्यहीं नै छौं । यो परिवर्तन, विकास, समृद्धि, सुशाशन त नेताले भाषणमा भन्ने कुरा हो । अहिले च्याउसरी उम्रेका ठुटे नेताहरुले पनि त्यही नै सिकिरहेका छन् । यसर्थ हामीले अनियमितता, भ्रष्टाचार, कुशासनको प्रतिस्पर्धामा एसियालार्ई उछिनीसक्यौं । अब बाँकी विश्वलार्ई पनि जित्ने दौंडमा छौं । स्थिरता, त्यागि र इमान्दार नेतृत्व पाउने त नेपालीको भाग्यमा लेखेको छैन । हामीलार्ई २०६४ सालपछि शान्ति, स्थिरता, समानता आइहाल्यो जस्तो लाग्यो । २०७४ मा इपुग्दा त अब विकासको मुल नै फुट्ने भयोजस्तो ग¥यौं । निशुल्क शिक्षा, स्वस्थ्य, रोजगार, रेल पानीजहाज, घर घरमा ग्याँस पाइप विकास त कति हो कति । दिउँसै सपना देख्न थाल्यौं । जुन हिजो पनि पटक/पटक देखेकैै थियौं ।
तानातान, हानाहान अनि अस्थिरता त २ तिहाईको जादुले सखाप पार्छ भन्ने ठान्यौं । जुन ३ वर्ष पनि टिक्न सकेन । हिजो पनि भएको यही थियो । २ तिहाईमा पनि त्यही भयो । केही नयाँ भएकै छैन । वास्तवमा देश चलाउँछु भन्नेले जानेकै यत्ति नै हो । कति देशप्रेमीलार्ई चिन्ता पनि होला देश अझ बिग्रने भयो ? कतिले भन्न थालिसके अझ ठूलो संकट आउने भयो ? सोच्नुस् त, अझ पनि देश बिग्रने ठाउँ छ र ? कस्ता÷कस्ता संकट त पचाइसक्यौं हामीले । हत्या, आतंका, त्रासदी कति कति । उनीहरुको व्यक्तिगत स्वार्थको लडाइँमा हिजो पनि जनता पिसिएकै थिए । आज पनि पिसिएकै छन् । पात्रहरु उहि, प्रवृत्ति उही, पारा उही ।
अनि अर्को कुरा कमरेड केपी ओलीको ठाउँमा कमरेड प्रचण्ड या माधव नेपाल भएको भए संसद विघटन हुन्थ्यो हुन्थेन त्यो तपसिलको कुरा हो । तर देश भने आज जहाँ छ त्यहीं नै हुने थियो । कुशासन, भ्रष्टाचार, अनियमितता, नातावाद, कृपावाद, व्रम्हलुटको अवस्था उही नै हुने थियो । किनकि उनीहरुको सफलता पनि हिजोदेखि सकेकै हो । अब पनि फेरि के होला भनेर टाउको नदुखाउनु होला ।
अझ महत्वपूर्ण कुरा त भन्नै भुलिएछ । वैशाखमा चुनाव होला नहोला तर एक दिन चाँहि अवश्य हुनेछ । त्यो चुनावमा तपार्इं हामीमाँझ उनीहरु फेरि आउने छन् । टिभीको स्क्रिनमा मात्र देखेका उनीहरुलार्ई आँखै अगाडि देख्न पाउदा भगवान नै पैदा भएजस्तो गर्ने छौं । ‘उनीहरु आउन थालेपछि झुपडीहरुमा स्वर्ण युगको बहार आउनेछ । भोका नांगाहरुको पनि दिन आउनेछ । कोही बेरोजगार बस्ने छैन । देशमा रामराज्य छाउनेछ ।’ चर्का चर्का स्वरमा यो सबै सुनिरहेका हामीहरु फेरि केही वर्ष पछि दंग पर्नेछौं । पेटमा भोकको ज्वाला छुटे पनि, शरीर नांगै भए पनि, आकाशकै छानो हालेर फेरि एक पटक आफ्नो नेतालार्ई जिताउन तछाडमछाड गर्ने नै छौं । उनीहरुका लागि बुथ कब्जा गर्न जानेछौं । मतपत्र च्यातेर, टाउको फोराफोर गरेर भए पनि चुनाव जिताउन कुनै कसर बाँकी राख्ने छैनौं । चुनाव जिताएर फर्काएपछि फेरि हामी गाली गर्न थाल्नेछौं । खै त विकास, खै त सुशासन, खै निशुल्क स्वस्थ्य, शिक्षा के भयो रोजगारका नारा आदिआदि ।
केही वर्षपछि फेरि उनीहरु उसैगरि फर्केर आउनेछन् । हामी सबै भुल्नेछौं । उनीहरुलार्ई देखेर उसैगरी छक्क पर्नेछौं । देशले यसैगरी हारिरहनेछ । उनीहरुले पटक पटक जितिरहनेछन् । जब सम्म हामीले उनीहरुलार्ई सहिरुपमा चिन्न सक्दैनौं तबसम्म यहि चक्र चलिरहनेछ । अरु केही हुने छैन ।
कथंकदाचित चुनाव छिटै भइदिइ हाल्यो भने केही चाहिँ फेरि अवश्य हुनेछ । लुकाइएको कालोधनको वर्षा हुनेछ । ती पैसाले निरीह गरिब, असहायको स्वभिमानमाथि फेरि खेलवाड गरिनेछ । भोटको खरिद बिक्री गरिनेछ । संधै यसैगरी स्वभिमानमाथि खेलवाड गर्न चाहने उनीहरुको छलकपट सोझा गरिबहरुलार्ई जहिलेसम्म थाहा हुँदैन तबसम्म केही हुँदैन । जबसम्म अभाव र गरिवी ती नेताका निम्ति अवसर बनिराख्नेछ तबसम्म केही हुनेवाला छैन । यहि प्रवृत्ति भएकाको हातमा सत्ता र शक्ति रहेसम्म यस्ता काण्ड, फण्डा र उदण्ड त मच्ची नै रहनेछ । फेरि चुनाव होला कांग्रेस, कम्युनिस्ट, राजावादी अनेकथरिले जित्लान् । तर हाम्रो भोटमा चोट पुरयाउनेले जबसम्म जित्नेछन तबसम्म केही हुँदैन । त्यसैेले उनीहरु रहेसम्म र यही अवस्था रहे सम्म फेरि पनि भन्नैपर्छ हामी भुइँ मान्छेका लागि केही हुँदैन ।